भर्सटायल सुबासको म्युजिक भिडियो कस्तो ? « Mazzako Online
भर्सटायल सुबासको म्युजिक भिडियो कस्तो ?
भर्सटायल कलाकार हुन् सुवास थापा । रंगमञ्च हुदै सिनेमामा समेत राम्रो नाम बनाएका सुवास पछिल्लो समय भने अमेरिकामा छन् । ‘बिर्खेलाई चिन्छस्’ नामको सिनेमा बनाएपछि अमेरिका हान्निएका सुवास यतिबेला अमेरिकामा बिलासी जिवन बिताईरहेका छन् । तर सँगै उनले कलाकारितालाई भने बिर्सेका छैनन् । बेला बेला फुर्सद मिलाएर उनी केही न केही काम गरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय उनले एक म्युजिक भिडियो बनाएका छन् । भिडियोमा आफैले अभिनय समेत गरेका छन् । ‘कुल्चि हिड्छन् फूललाई’ बोलको गीतको भिडियो उनले आफ्नै निर्देशनमा तयार परोका छन् । खेम रिजालको शब्द, छवि न्यौपानेको आवाज र कर्मा ग्याल्चेनको संगीत रहेको यो गीतमा सुवास र उनी धर्मपत्नी बिनिता खड्काले अभिनय गरेका छन् ।
भिडियोमा अमेरिककी कलाकारहरु सिईला, प्याट्रिक र कृष्टिनाको पनि अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई लिएर दर्शकहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिईरहेको सुवास बताउछन् । सुवासले नेपालमा रहदाँ ‘कोही मेरो’, ‘तथास्तु’, ‘तोरी लाहुरे’, ‘ब्रेकफेल’ लगायत चलचित्रहरुमा अभिनय गरेका थिए । ‘बिर्खेलाई चिन्छस्’ उनी आफैले बनाएको सिनेमा हो ।
त्यस्तै अमेरिका उनले एक अंगे्रजी फिल्म ‘हाऊ टु किप योर म्यान ह्याप्पी’ मा पनि काम गरिसकेका छन् ।